Bearberry - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Bearberry
Bearberry ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Bearberry သည် ဆီးသွားနိုင်စေရန်ကူညီပေးပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ရာသီလာသည့်အချိန်တွင်လည်း ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အရောင်ကျဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး အခြားသော အသုံးဝင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ အောက်ပါတို့သည် တွေ့ရှိထားသော လေ့လာမှုအချို့ဖြစ်ပါသည်။
• ပိုးသတ်နိုင်ခြင်း၊ ဆီးဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်ခြင်း။ Bearberry ၏ ပါဝင်သောဓါတုပစ္စည်းများတွင် ဆီးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော triterpene chemical components and arbutin,ahydroquinone ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ပိုးပွားခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အပြင် ဆီးဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
• အရောင်ကျစေသော အာနိသင်- bearberry, quercitrin ၏ အစိတိအပိုင်းများတွင် အရောင်ကျစေသော အာနိသင်ပါရှိသည့်အတွက် အရောင်ကျဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Arbutin and urosolic acid တွင်လည်း အရောင်ကျစေသော အာနိသင်ရှိသည်။
Bearberry အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Bearberry ပါဝင်သော ဆီးဆေးများကို အသုံးပြုလျှင် electrolyte ကို စစ်ဆေးကြည့်သင့်သည်။
Bearberry ကို အောက်ပါတို့ဖြစ်လျှင် မသုံးပါနှင့်။
• အစာအိမ်နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိလျှင်
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်
Bearberryကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဤဆေးပင်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါသည်။
• ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊အစားအသောက် ပျက်ခြင်း၊ အသည်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်း၊
• နားအူခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ဂယောင်ဂတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း။
Bearberry ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
သွေးကျဲဆေး၏ အာနိသင်ကို တိုးစေသောကြောင့် အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ သွေးယိုခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤ ဆေးပင်သည် ဆီးဆေးများနှင့် တွဲသုံးလျှင် electrolyte ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေပြီး ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်နည်းစေပါသည်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၏ အာနိသင်ကိုလည်း တိုးစေသည်။
Urine acidifiers သည် bearberry ၏ အာနိသင်ကို ပိတ်ပင်သောကြောင့် တွဲဖက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
Bearberryအတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Bearberry က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
version. Page 56.
Bearberry. http://www.drugs.com/cdi/bearberry.html. Assessed August 4, 2016.
Bearberry. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 958-bearberry%20(cranberry).aspxactiveingredientid=958&activeingredientname=bearberry%20(cranberry).Assessed August 4, 2016.
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 56.
Bearberry. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 958-bearberry%20(cranberry).aspx?activeingredientid=958&activeingredientname=bearberry%20(cranberry).
Assessed August 4, 2016.